Obbo Jawaar Mohammadfaa marsaa sadaffaaf dhaddacharraa of hambisuun isaanii dhaga’ame. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsObbo Jawaar Mohammadfaa marsaa sadaffaaf dhaddacharraa of hambisuun isaanii dhaga’ame.
Manni murtii Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa olmaa guyyaa har’aa ooleen galmee Obbo Jawaar Mohammadfaa ilaaluuf taa’us, Obbo Jawaar Mohammad dabalatee Obbo Baqqalaa Garbaa, Haamzaa Booranaafi Dajanee Xaafaa yeroo sadaffaaf dhaddacharraa of hambisuu isaanii Abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Kadir Bulloo OMN-tti himaniiru.
Beellamoota daraban Waxabajji 21,2013 sababa mana murtiitti dhihaachuu hin barbaanneef iyyannoo barreeffamaa dhiheeffachuun isaanii kan yaadatamu yoo ta’u, manni murtichaa bulchiinsi mana hidhaa Qaallittii dirqamaan akka isaan dhiheessuuf Waxabajji 29tti beellamee ture.
Beellama Waxabajji 29 irrattis hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kunniin utuu hin dhihaatin hafuudhaan, iyyaannoo barreeffamaa dabalataa mana murtichaaf dhiheessuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama.
Akka iyyannoon isaanii agarsiisuttis, olaantummaan seeraa kabajamaa waan hin jirreef, ajajnj manni murtii dabarsus poolisiidhaan kufaa ta’aa sababa jiruuf, hidhamtoota siyaasaa Oromoo garaagaraa manni murtii yeroo biliisa baasu poolisiidhaan butamas waan jiraniif, nutis haqaa arganna jennee mana murtiitti hin deddeebinu kan jedhu ture.
Bu’ura iyyannoo isaanii kanaatiin, abbaan alangaa yaada mormii mana murtichaaf yoo dhiheessu, himatamtonni kun dirqamsiifamanii poolisiidhaan haa dhihaatan jechuun mana murtichaa gaafatee ture.
Manni murtichaas beellama har’aa kanarratti bulchiinsi mana hidhaa Qaallittii dirqamaan Obbo Jawaar Mohammadfaa akka dhiheessu ajajus, marsaa sadaffaaf Obbo Jawaar Mohammad dabalatee hidhamtoonni siyaasaa sadan hafanis utuu hin dhihaatin hafaniiru.
Dhaddacha har’aa kanarratti bulchiinsi mama hidhaa Qaallittii dhihaatee deebii yoo kennu, dirqamaan isaan dhiheessuu akka hin dandeenye himee jira. Abbaan Alangaas manni murtii poolisiin dirqamaan akka isaan dhiheessuuf ajaja akka dabarsu gaafachuusaa Abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Kadir Bulloo himaniiru.
Manni murtii Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataas iyyannoo gama lamaanii ilaaluun, sagalee abukaattoowwaniis dhaggeeffatee murtee dabarsee jira. Murtiin isaas, hidhamtoonni kunniin mana murtiitti dhihaachuu dhiisuun karaa Abukaattoo isaanii dhimma ofii hordofuun mirga heerri kenneef waan ta’eef, gaaffii Abbaan Alangaa poolisiin dirqamaan haa dhiheessu jedhu kufaa taasisee jira.
Gama biraatiin hidhamtootni siyaasaa galmee Obbo Jawaar jalatti himataman warreen kaan dhaddacha irratti kan dhihaatan yoo ta’u, komii qaban mana murtichaaf dhiheessaniiru. Meeshaalee xixiqqaa gaafa hidhaman poolisiin isaanirraa fuudhe maatiitti hin deebifamne kan jedhan hidhamtoonni kunniin, bilbilaafi kkf ammoo qaamota nuti hin beekneen itti fayyadamaa jira jechuun komataniiru. Manni murtichaas akkaataa ragaa dhaggeeffachuu ilaalchisee komii ilaalamaa jirurratti murtii dabrsuuf beellama itti aanu Adoolessa 30,2013tti bulfatee jira.
Oromo Liberation Front(ABO-OLF)
Gaaffii fi deebii Obbo Jawaar Mahaammad waliin taasifne የነወሬ ዳቦ! ኣሁን ደግሞ ሰቶቹ በዙ ዉይ…
AMMEE! Jawaar Mohammadii fi Obbo Baqqalee Garbaa dhukkubsachuun dhagahame. Akka maddeen qabatamoo Qaalittii irraa hubachuun…
Obbo Baqqalaan Shakkii Ajjeechaan Himataman: Haadha Warraa Isaanii aadde Haannaa Raggaasaa WAASHINGITAN, DIISII — (voaafaanoromoo)--Geggeessaa…